Channels no singa vaovao lehibe amin'ny Telegram | Androidsis
Channels, ny zava-baovao vaovaon'ny Telegram handefa hafatra amin'ireo mpampiasa an'arivony miaraka
Raha manohy manjakazaka amin'ny fahafaha-manaony amin'ny fampiharana na serivisy fandefasan-kafatra WhatsApp, Telegram ny fahamarinana fa mandeha tsara izy io. Tsy misy mpampiasa intsony izay, ankoatry ny fametrahana WhatsApp dia manana Telegram ho fampiharana tianao indrindra hifandraisana amin'ny namanao na fianakavianao. Azontsika atao ny milaza fa mandeha any amin'ny fantsom-pifandraisana hafa ny Telegram izay aleonay ny sakaizantsika ary ataon'izy ireo manadino ny mpampiasa sasany ny fampiharana kisary antso maitso.
Iray amin'ireo fiarovana mafy Telegram dia ireo fanavaozana mitohy fa naneho hevitra foana izahay isaky ny misy vaovao mipoitra ary mitondra fiasa vaovao satria androany marina miaraka amin'ny kinova vaovao izay hampidirina ny Channels. Fitaovana vaovao hahatratrarana mpihaino marobe ary izany dia hanana fampiasa marobe satria azo antoka fa efa mamorona ny sasany aminareo, ankoatry ny fanaovana ireo doka amin'ny dokambarotra sy ny politika izay itarihana antsika ankehitriny.
1 Fantsona fampielezam-peo vaovao hahatratra mpihaino marobe
2 Araho ny fantsona Telegram
Fantsona fampielezam-peo vaovao hahatratra mpihaino marobe
Telegram dia nanolotra Channels androany, fitaovana vaovao ho vonona amin'ny fampiharana tianao indrindra amin'ny fandefasan-kafatra an-tserasera. fantsona tonga hisolo ny fampielezam-peo ary anisan'ny kalitaony lehibe indrindra ny isan'ny mpikambana tsy voafetra.
Izany dia tanterahina amin'ny fomba izay mety hahatongavan'izy ireo ampahibemaso miaraka amin'ny URL maharitra ary miaraka amin'izay ny lahatsoratra na ny fidirana tsirairay ao amin'ny fantsona dia manana ny fahitan'izy ireo azy. Ireo fomba fijery ireo dia hampiditra ireo hafatra nampitaina ihany koa mba hananan'izy ireo ny mpanohitra azy ireo.
Ny iray amin'ireo hatsaram-panahiny lehibe indrindra dia ny mpikambana vaovao miditra amin'ny fantsona iray azonao jerena daholo ny tantaran'ny hafatra ary tsy ireo izay notanterahina hatramin'ny fotoana voalohany nanombohanao nandray anjara tamin'izany.
Araho ny fantsona Telegram
Ho fitokanana ity fampiasa amin'ny Channels ity dia nandahatra i Telegram fantsonao manokana ho eo alohan'izay vaovao rehetra avy amin'ity serivisy ity fandefasan-kafatra ary tsy manadino.
Tolo-kevitra tena mahaliana amin'ity serivisy ity ho manohy manolotra kalitao ary ataovy sarotra kokoa amin'ny WhatsApp, satria misy mpampiasa azy io afaka manana safidy tsara hafa amin'ny Telegram raha mitady safidy hafa izy ireo.
Amin'ny fanavaozana farany ny taona ananany vaovao marobe tena mahaliana no tonga ahoana ny fahaizana mampiditra mpilalao anatiny toy ny YouTube, fampandrenesana marani-tsaina, fahitana topi-maso mialoha na ny manonona sy valiny haingana ankafizin'ny endri-javatra maro hafa. Andao lazaina fa taona niasa be ho an'ny Telegram sy ho an'ireo mpampiasa izay mitohy mitombo isa rehefa mandeha ny herinandro sy ny volana.
Ireo vaovao rehetra ireo miaraka amin'ny Channels ankehitriny dia mahatonga ny Telegram ho fampiharana tsara ankoatra inona ny serivisy serasera na ho an'ny mpampiasa na ho an'ny orinasa. Ka mankanesa any amin'ilay widget eto ambany ianao mba handeha mivantana amin'ny fanavaozana izay hahafahanao mametraka ity zava-baovao lehibe ananantsika androany ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Channels, ny zava-baovao vaovaon'ny Telegram handefa hafatra amin'ireo mpampiasa an'arivony miaraka
Walter mendoza dia hoy izy:
ratsy loatra fa tsy azo idirana amin'ny talback
Valiny tamin'i Walter Mendoza
aura dia hoy izy:
Tsy azoko hoe inona no tombony azo amin'ny vondrona, hafa noho ny mpikambana tsy voafetra. Mbola lalan-tokana ihany koa izy ireo, sa tsy izany? Izany hoe, tsy toy ny vondrona, izay ahafahan'ny mpikambana rehetra mandray anjara, ao amin'ireo fantsona ihany no ahafahan'ny tompony manoratra, ny mpikambana hafa ihany no mijery azy, sa tsy izany?
Zavatra iray hafa, hampiroborobo ny Telegram, fa amin'ny bokotra hizarana ny vaovao dia tsy miseho afa-tsy amin'ny valala sy ny tambajotra sosialy 3. Ralehilahy, tsy maintsy mifanaraka ianao ary apetraho amin'ny telegrama ny iray.
Valiny tamin'i Aure
Na dia ireo hevitrao taloha aza dia tsy vitako ny nanohitra ny fanomezana anao ny Air marina. Betsaka ny resaka telegram ary tsy manana izy ireo amin'izao fotoana izao ary hatramin'ny namoahan'ilay lahatsoratra ny rohy fampielezam-peo avy amin'ny fantson'izy ireo manokana avy amin'ny telegram
Web Scrapbook, ny fampiharana tsara indrindra hakana pikantsary pejin-tranonkala